ပုံပြင် | မျိုးမြန်မာ
Posted in: ရသစာပေ.	Tagged: ပုံပြင်, ရသစာပေ, Story.	Leaveacomment
(၁) အတွေ့အကြုံက ရသော အသိ ခြင်္သေရယ် ၊မြည်းရယ် ၊မြေခွေးရယ် မိတ်ဆွေဖြစ်ကြပြီး အစာရှာထွက်ခဲ့ကြသတဲ့ ။ အမဲတစ်ကောင်ကိုရတဲ့အခါ ခြင်္သေ့က မြည်းကို ဝေစုခွဲဖို့ပြောတယ် ။ မြည်းဟာ အမဲကောင်ကို သုံးပုံ အညီအမျှ ခွဲလိုက်တယ် ။ ပြီးတော့မှ ခြင်္သေ့ ကို တစ်ပုံယူစေလိုက်တယ် ။ ခြင်္သေ့ဟာ မြည်းကိုစိတ်ဆိုးသွားပြီး ကိုက်စားပစ်လိုက်ပါရော။ နောက်မြေခွေးကို ခွဲခိုင်းပြန်တယ် ။ မြေခွေးဟာ ဝေစုအားလုံးကို တစ်ပုံတည်း ပုံလိုက်တယ် ။ သူ့အတွက် အကြွင်းအကျန်နည်းနည်းပဲ ချန်ထားတာပေါ့ ။ပြီးတော့မှ ခြင်္သေ့ကို ယူစေလိုက်တယ် ။ခြင်္သေ့က သဘောကျသွားတာပေါ့ ။ ခြင်္သေ့က သည်လိုဝေစုခွဲပုံကို ဘယ်သူ သင်ပေးတာလဲ လို့ မြေခွေးကို မေးလိုက်တာပေါ့ ။ ” မြည်းရဲ့ အဖြစ်ကို ကြည့်ပြီး သိတာပါ ” လို့မြေခွေးကပြောလိုက်တယ် ။
(အခြားသူတွေ ဘေးဒုက္ခတွေ့ပုံကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်က သင်ခန်းစာယူတတ်ရတယ်။)
(၂) ခြင်္သေ့ ရဲ့ ပြောဆိုချက် တစ်ခါတုန်းက ခြင်္သေ့ တစ်ကောင်နဲ့ လူတစ်ယောက် ခရီးအတူထွက်လာကြတယ် ။ နှစ်ယောက်စလုံး ဟာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ကြွားဝါပြောဆိုရင်း လာခဲ့တာပေါ့ ။ ခြင်္သေ့ကို လူက ဓါးနဲ့ ထိုးသတ်နေတဲ့ ပုံကို ထုထားတဲ့ ကျောက်ရုပ်ထုကို လမ်းမှာတွေ့တယ် ။ ဒီအခါမှာ လူက ကျောက်ရုပ် ဆီလက်ညှိုးထိုးပြရင်း ” တွေ့တယ်မလား လူတွေဟာ မင်းတို့ခြင်္သေ့တွေထက် သန်စွမ်းတယ် ” လို့ပြောလိုက်တယ် ။ ခြင်္သေ့က ပြုံးလိုက်တာပေါ့ကွယ် ။ ပြီးတော့ . . . . . ” ခြင်္သေ့တွေသာ ပန်းပုပညာကို တတ်မယ်ဆိုရင် လူကိုခြင်္သေ့ ကကိုက်စားနေပုံလည်း ခင်ဗျားတွေ့ရလိမ့်မယ် ” လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ် ။
(လုပ်ခွင့်သာတဲ့လူသာ လုပ်ခွင့်သာသလို လုပ်တတ်ကြတာ လောကဓမ္မတာပါပဲ ။)
(၃) ပိရိအောင် မညာတတ်သူ လှေသဘောင်္တွေနဲ့ ခရီးသွားသူတို့ဟာခွေးတွေမျောက်တွေကို ခေါ်သွားလေ့ရှိတယ် ။ ကြာရှည်လှတဲ့ ရေလမ်းခရီး တစ်လျှောက်မျာ အပျင်းဖြေအချိန်ကုန်လွန်စေဖို့တဲ့ ။ ခရီးသွားတစ်ယောက်ကတော့ မျောက်ကိုခေါ်ခဲ့တယ် ။ အာတိတ်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ ဆူနီအမ် အငူက ထွက်လာရင်ပဲ ပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြီးကျပါလေရော။ မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် လှေလည်း မှောက်သါားတယ် ။ ဒီတော့ လူတွေရေထဲကျကုန်တယ် ။ခုနကမျောက်လည်းကျသွားတာပေါ့ ။ သူတို့ ဟာတွယ်စရာတစ်ခုကိုဖက်ပြီး ပင်လယ်ထဲ မျောနေတာပေါ့ ။ လင်းပိုင်ငါးဟာ မျောက်ကို လူထင်မှတ်ပြီး သူ့ကျောပေါ်တင်ကာ ကမ်းဆီကယ်ဆယ်သွားတယ်။ အေသင်ပြည် ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်တဲ့ ပိုင်ရီအပ်စစ် ကိုလည်း ရောက်ရော လင်းပိုင်ငါးက ” ခင်ဗျားဟာ အေသင်ပြည်သားလား ” လို့မေးပါတယ်။ မျောက်ကလည်း ဟုတ်ပါတယ် လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ် ။ဒါတင်မက ဘူး ကျွန်တော့် မိဘတွေ ဟာအေသင်ပြည်မှာ အလွန်ထင်ရှားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ လို့ ထပ်ပြောလိုက်သေးတယ် ။ ” ပိုင်ရီအပ်စ် ကိုသိပါသလား ” လို့မေးတယ် ။မျောက်က ပိုင်ရီအပ်စ်ဆိုတာ လူနာမည်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေတာကိုး ။ ဒါကြောင့် ပိုင်ရီအပ်စ်ကို ကောင်းကောင်းသိတဲ့ အကြောင်း၊ ပိုင်ရီအပ်စ်ဟာ သူ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ပြောဆိုတာပေါ့ ။ သူလိမ်ညာနေမှန်း လင်းပိုင်က သိသွားပြိး စိတ်အတော်ဆိုးသွားတယ် ။ သူ့ကိုလည်း ကျောပေါ်က ခါချပစ်လိုက်တာပေါ့ ။ ဒီလိုနဲ့မျောက် ဟာ ရေနစ်သေဆုံးသွားပါတယ် ။
(လူတွေဟာ မိမိကိုယ်တိုင် မသိမကျွမ်းတဲ့ ကိစ္စကို အခြားသူတွေ ယုံကြည်မယ်ထင်ပြီး ပုံပြင်ထဲကမျောက်လိုပဲဖြီးတတ်သူ တွေအများကြီးပါ )
ဦးခင်မောင်ကြီး(ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်) အီစွတ် ပုံပြင်ပေါင်းချုပ် မှ ပြန်လည်တင်ပြပါသည် . . . .
← မွတ်ဆလင်များ အတွက် ၀မ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကောင်း။
Apple Computerနှင့်Pixar Animation Studio တို့ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည် Steve Jobs ပြောကြားခဲ့သည်မှတ်သားဖွယ်မိန့်ခွန်း →